#Xujey Soomaali ah ayaa soo laabanaya iyaga oo aan xajiyin sida ay sheegaan - Get Latest News From Horn of Africa
#Xujey Soomaali ah ayaa soo laabanaya iyaga oo aan xajiyin sida ay sheegaan
By WARIYAHA MUQDISHO On Aug 13, 2019
Qaar ka mid ah Soomaalidii Sanadkan u xajisay Dalka Sucuudiga ayaa soo laabanaya iyaga oo aan xajiyin sid aay sheegaan.
Dad ka badan 400 qof oo Soomaali ah ayaa la sheegayaa in siyaabo kala duwan uu ku seegay Xajka waxaana cilladda ugu weyn ka dhalatay iyaga oo aan garaneyn habka loo guto Acmaasha Xajka sharikadihii u ballanqaaday in dad bara ku darayaanna aysan ku soo laaban.
Dadka sanadkan uu xajka seegay ee raja xumada muujiyay waxaa ka mid ah; Salaad Sheekh Cabdulle iyo Xasan Maxamed Faarax, kuwaas oo sheegay in ay ka baxeen Xamar lagana qaatay lacag dhan $3600, maanta ay banaan cidlo ah ka jiifaan.
Waxaa ay sheegeen in aysan garaneyn sida loo guto acmaasha Xajka, shariakadihii qaaday ee u ballanqaaday in culimo barta gudhasha acmaasha Xajkana ay uga baxeen islamarkaana heysan hooy iyo nolol.
Xasan Maxamed Faarax ayaa sheegay in laga qaaday $3600 oo doollar islamarkaana uu ka xunyahay in Xajkii dhamaado isaga oo aan waajibkii gudan.
Waxaa uu eedda ugu weyn saaray sharikadda diyaaradda ee isaga geysay Xajka oo uusan magaceeda sheegin hayeeshee sheegay in ay ku ballan furtay islamarkaana dayacday.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan 58 Sharikadood oo kuwa diyaaradaha ah ruqsad u siisay in ay Xajka geeyaan Xujeyda Soomaaliyeed markii ay tartansiisay 84 Sharikadood.
Heeyeshee xujeyda ka xajisay Soomaaliya oo ay tiradoodu gaareyso 11,500 oo Xaaji ayaa qaarkood waxaa ay ka cabanayaan in lagu ballan furay islamarkaana la gefiyay Xajkii lacagna laga qaatay.
Todobaadkii hore Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadayaan sharikadaha diyaaradaha qaarkood oo dayacay Xujeyda markii ay uga baxeen Basaskii geyn lahaa Magaalooyinka Maka iyo Madiina.